Cold Showers - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
Todd Becker က၏ blog post: ကနေခေါ်ဆောင်သွား:
အအေးမိတာကတော့စိတ်အခြေအနေကောင်းတယ်။ သူတို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်ပေးရုံတင်မကဘဲသူတို့သည်သင့်အားရှင်သန်နေစေသည်၊ အရေးကြီးသည်၊ ထိုနေ့၌ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်စေသည်။ သူတို့သည်နံနက်စောစောတွင်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ …ဤဆိုးကျိုးများကိုပထမဆုံးသောရေအေးနှင့်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်လေ့ကျင့်ပါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်များသည် ပို၍ ပင်ကြီးမားကြောင်းသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အရေးအကြီးဆုံးအအေးမိရေပန်းများသည်စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုခံယူခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာသတင်းဆိုးများ၊ အံ့သြဖွယ်ရာများ၊ အငြင်းပွားမှုများသို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်များသည်ယခင်က adrenaline သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးခြင်းတို့ကိုမြင့်တက်စေသည့်၊ ဆိုးဝါးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိတော့သော၊ ဆိုးရွားသည့်သတင်းများ၊ ငါထင်တာကတော့ဒီအအေးမိမှုရဲ့ adrenaline ထုတ်လုပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်။ အအေးမိရေပန်းများသည်စိတ်ကိုမြှင့်တင်ရာတွင်အဘယ်ကြောင့်အကျိုးရှိသည်၊ အအေးမိရေပန်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများသည်အဘယ်ကြောင့်ကြာရှည်စွာသင်ရယူသည်ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းသောရှင်းပြချက်သည်ကျွန်ုပ်၏မကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သော စိတ်ခံစားမှု၏ပြိုင်ဘက်-ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီ.
အအေးမိခြင်း၏ကန ဦး အပြင်းအထန်အဆင်မပြေမှုသည်ပြင်းထန်မှုနှင့်ကြာချိန်နှစ်ရပ်လုံးတွင်လျှင်မြန်စွာကျုံ့သွားပြီးအပူအပင်၏ဖြစ်စဉ်၏သီအိုရီသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှအကြာတွင် ပို၍ ထင်ရှားလာသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းညှိခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့တွင်အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အအေးခန်းတွေစကတည်းကကျွန်တော်မှာအအေးမိတာမရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်၏မိသားစုသည်အစာအိမ်တုပ်ကွေးရောဂါဖြင့်ရက်ပေါင်းများစွာခံနေရသောအခါကျွန်ုပ်အပေါ်အသားတင်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ ၁၂ နာရီကြာအောင်အိပ်စက်ခဲ့ရပြီးတစ်ညတည်း၌အိပ်ခဲ့ရသည်။
အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းယူ5သိပ္ပံနည်းကျအကြောင်းရင်းများ
အဆိုပါဂျိမ်းစ်ဘွန်းပန်းရေချိုးခန်း: တစ်ဦးကကနျြးမာရေးအတှကျအရေအေးအေး၏ Shot နှင့်အရေးပါသောအ
တကယ်ပဲအရေးကြီးဒါကအေးမိုးနှင့်7ကိုယူမှ 1 အကြောင်းရင်းများ
အေးပန်းရေချိုးခန်းကုထုံးအမေးအဖြေများ (ထညျ့) နှင့်ဗီဒီယိုများ
အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းပေါ်မှာ TEDx ဟောပြောပွဲ
ငါစွဲလမ်းနေအောင်ကူညီပါ။ ယနေ့ငါ ၃ သို့မဟုတ် ၄ ရှိပြီးပြီ ငါ၌တစ်ခုစီရှိတိုင်းတစ်ခုချင်းစီတွင်ကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒတိုးပွားလာသည်ကိုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ ဒီဟာတွေကစိတ်ကူး မင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးထဲမဝင်မချင်းတစ်ချိန်တည်းမှာခြေလက်တစ်ချောင်းကိုသာထားပါ။ အကယ်၍ သင်လိုအပ်လျှင်အသက်ရှူနှုန်းကိုနှေးကွေးစေပြီးပုံမှန်နှုန်းသို့တက်ရန်ကြိုးစားပါ။ အသက်ရှူခြင်းနှေးကွေးပြီးတာနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုအတော်လေးသိသာပြီးတစ်နေ့လုံးပိုကောင်းစေပါတယ်။
အအေးရေချိုးခန်း! သူတို့ကိုလုပ်ပါ။ သငျသညျအီနှင့်အတူကိုင်တွယ် / လကျခံဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ပြီးတာနဲ့တိုက်ရိုက်ရမ္မက်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်ဖြစ်သော, သင်တို့၏ဆင်ခြင်တုံတရားအာရုံကြောလမ်းကြောင်းခိုင်ခံ့စေ၏ရှိသည်ဟုမည်!
ငါရှိခြင်းကိုစတင်ရွေးချယ် အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း အဖြစ်ကောင်းစွာ။ ကန ဦး ၌၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နေစိတ်ထားကိုချက်ချင်းဖြစ်စေ၊ ငါကသာစက္ကန့် ၃၀ လောက်ကြာအောင်ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းတွေကျနေတယ်။ ဒီဟာကပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မိနစ်ပိုင်းလောက်မှာပျော်စရာအတွေ့အကြုံတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ရေထဲကိုခုန်ထွက်ပြီးခုန်ထွက်လိုက်တယ်။ ဒီရေအေးအောက်မှာတကယ်ရပ်တည်ရန်ငါဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါဒါကပိုကောင်းလာတယ်။ အနည်းဆုံးအား3မိနစ်ငါ့အရေကနေထုံသွားသည်အထိ။ အလေးအနက်ထား, အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းမလုပ်သောသူမည်သူမဆိုဤအမှုကိုကြိုးစားရန်လိုအပ်ပါသည်! ဦး နှောက်အေးခဲသွားခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင်၏အသားအရေသည်နွေးထွေးလာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ခဏအဲဒီမှာအဲဒီမှာရပ်ပါ မင်းအံ့သြစရာကောင်းတယ် သင်ကိုယ်တိုင်ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်တဖန်အဝတ်အစားတွေဆည်းပူးပြီးနောက်။ အိပ်ရာမဝင်ခင်တကယ့်ကိုကောင်းပါတယ် LINK
အအေးမိရေပန်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက် (အသုံး ၀ င်မှုအရ) ၅/၁၀ ဖြစ်သည်။ ရေအေးသည်သင်ထင်သလောက်လက်တွေ့မကျပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အလွန်အေးလွန်း။ သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ကြာမြင့်စွာနေနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အအေးပြီးတော့ပျမ်းမျှပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါအစာရှောင်ခြင်းရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း၏ technique ကိုသုံးပါ။ ငါ့အတွက် 5/10 အလုပ်လုပ်တယ် အခြေခံအားဖြင့်ငါရေချိုးခန်းထဲမှာပုံမှန်အပူချိန်နဲ့စပြီးတစ်မိနစ်တိုင်းမှာရေရဲ့အပူချိန်ကိုအေးအောင်လုပ်တယ်။ ကြာကြာလေလေအေးလေပဲ။ နောက်ဆုံးတော့အရမ်းအေးတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ရေကိုပိတ်လိုက်ပြီးရေချိုးခန်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီနည်းနဲ့ငါသန့်ရှင်းတဲ့အတွက်ရေအေးတစ်မျိုးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရတယ်။
အဘယ်သို့ငါပြုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအအေးမိတာ။ ဟုတ်ပါတယ်, ကုထုံးတကယ်အလုပ်လုပ်တယ်။ အကျိုးကျေးဇူးများများစွာရှိပါသည် - ရှာဖွေပါ။
အအေးခန်း - ကျွန်ုပ်သည် ၈၁ ရက်ပတ်လုံးလမ်းလျှောက်နေပြီး၊ ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေသည့်နေရာပေါ် မူတည်၍ အအေးဆုံးသောရေပန်းကိုသောက်နေပါသည်။ ဒါကမင်းရဲ့နံနက်သစ်သားကိုဘယ်လိုသတ်လဲ၊ ဒီကနေထွက်ချင်တဲ့ဆန္ဒကပြင်းလွန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကခုခံတွန်းလှန်နေပြီးသင်ဟာကမ္ဘာ့ဘုရင်လိုမင်းလိုရေချိုးခန်းထဲကနေထွက်သွားတယ်။ မင်းကသန့်ရှင်းတယ်၊ ယုံကြည်တယ်၊ မာနကြီးတယ်၊ မင်းရဲ့နေ့ရက်ကိုအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့စတင်နိုင်ပါတယ်။ အသက် ၁၈ - မိန်းမများကိုကျွန်ုပ်မဖော်ပြလိုတော့ပါ။
ကျွန်ုပ်၏လိင်အင်္ဂါများမှရေအေးသည်စီးဆင်းခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ယူနစ်ကိုနစ်မြုပ်ထားခြင်းကလက်တွေ့မကျပါကအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်သည်အေးသောစိုစွတ်သောအဝတ်လျှော်ကိုသုံးသည်။ [မှတ်ချက် - Daoist လက်စွဲတွင်ဤနည်းသည်“ ရေကိုရေအေးထဲနှစ်မြုပ်ခြင်း” အဖြစ်လည်းတွေ့ရသည်။ ] ဒီ technique ကိုပိုမို.
ငါရေချိုးတဲ့အအေးခံတစ်နေ့တာလုံးမောနေလို့မခံစားရဘူး။ ပထမတော့ခက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနည်တယ် (အပူမရှိတဲ့အအေးခန်းအားလုံးကိုငါလုပ်တယ်) ။ ဒါဟာကျိန်းသေသင်တက်ကြွပေးသည်။
ငါ့ကိုဘာကကူညီပေးခဲ့တာလဲ - ရေအေး။ အလေးအနက်ထားငါနေဆဲသူတို့ကိုယူပါ။ ငါလုပ်တဲ့အရာကရေပူနဲ့စပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆေးကြောပြီးရင်အေးသွားပြီးရေခဲရေအောက်မှာ ၅ မိနစ်လောက်နေရမှာပါ။ နောက်တော့ငါဘုရင်လိုခံစားရတယ်။ မည်သူမဆိုမှအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ဆုကြေးငွေနှင့်စိတ်ကူးယဉ်သတ်တယ်။ အသက် ၁၉ - ယုံကြည်မှုသည်မြင့်မားသည်၊ မည်သူမဆိုစကားပြောဆိုနိုင်သည်၊ ဦး နှောက်မြူမှုန်ဝါးခြင်း၊ မိန်းကလေးများ၏ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံရိပ်
၇၅ ရက်အကြာမှာငါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အရာကရေအေးတစ်မျိုးရဲ့စွမ်းအားပဲ။ အကယ်၍ သင်ဟာသင့်ကိုကိုယ့်ရှေ့ကနေဖယ်ထုတ်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှန်တကယ်ကမ္ဘာထဲသွင်းဖို့တစ်ခုခုလိုအပ်မယ်ဆိုရင်ရေအေးတစ်မျိုးဟာအခုချက်ချင်းလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ငါအပြည့်အဝအအေးခံရန်ကြိုးစားခဲ့သည်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်ငါသည်းမခံနိုင်။ စိတ်တိုလွယ်သောချုံးချုံးကျသွားစေသောနေရာသို့ရောက်သွားသည်။ ယခုကျွန်ုပ်သည် "Bond" ရေချိုးခန်းသို့ပြောင်းသွားပြီ (ပူပြင်းပြီးအအေးခံပါ) နှင့်ပြီးပြီ ယခုနီးပါး 75 ပတ်အဘို့။ လုံးဝချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ သို့သော်အားနည်းချက်ရှိသည့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုရေအေးသည်သင့်ကိုအပြည့်အဝအခိုးအငွေ့အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သည်။ သူတို့ကိုငါမယုံနိုင်လောက်အောင်ပျော်စရာကောင်းတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တစ်နေ့လုံး“ အဆင်ပြေပါတယ်” လို့ကျွန်မဘယ်လောက်အထိခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အခုတော့ငါရေချိုးခန်းထဲမှထွက်လာသည်နှင့်အမျှအေးမြသောလေထုကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုချစ်စရာကောင်းလှ၏။ ငါမလိုအပ်သောနံနက်တိုင်းထိုကြောက်ရွံ့မှုကိုငါနှိပ်စက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် နွေးထွေးမှု၏နှစ်သိမ့်၏။ အသေးအဖွဲအဆင်မပြေမှုစိတ်ကူးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ရယ်စရာဖြစ်သည်။ ငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေဖို့ငါတည်ဆောက်သည်သည်းခံစိတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေသည်းခံစိတ်မှ ဦး ဆောင်နေသည်။ = fapping မရှိ! ၎င်းသာမကအပူ / အအေးဒဏ်လည်းများသည်သွေးလည်ပတ်မှုနှင့်ကြွက်သားနာကျင်မှုအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ ငါအရမ်းအအေးရိတ်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါအများကြီးပိုကောင်း!
ရေအေး မင်းရဲ့ testosterone ဟော်မုန်းတိုးလာမယ်ဆိုတာငါမပြောဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာတကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေကိုသတ်ပစ်တာပဲ။ ပြီးတော့နင့်ကိုပိုနိုးလာစေတယ်။ နံနက်ထုံးတမ်းများအတွက်ကောင်းပါတယ်
ငါယောဂနေ့စဉ်တစ်ပါတ်အဘို့နေ့တိုင်းအအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါကကျွန်မရဲ့နေ့စဉ်စိတ်အခြေအနေကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းဂိမ်းမရှိသဖြင့်တစ်ပါတ်အကြာတွင်ရှိသည်။ NoFap လိုပဲငါခေါင်းထဲမှာအသံနည်းနည်းလေးရသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုငါဖြတ်သန်းတယ်ဆိုတာသိလို့သူတို့ကိုစောင့်နေတယ်။
သင်တို့ရှိသမျှတကယ်တော့တစ်ဦးချမ်းအေးရေချိုးခန်းယူပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှသောလူတစ်ဦးကြိုးစားသင့်! အဆိုပါခံစားချက်နောက်မှပြန်လည်နုပျိုခြင်း, ရွှင်လန်းခြင်း, လှုံ့ဆျောမှု၏သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ရေအေးတစ်ချက်သောက်ခဲ့ဖူးတယ်။ နံနက်စာအတွက်ကြက်ဥများကိုလုပ်သည်။ ယခု Rooibos လက်ဖက်ရည်အချို့သောက်နေသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့မနက်မှာအအေးမိတာ၊ ဒါပေမယ့်ရေအေးပြီးတဲ့နောက် - ငါတကယ်ပူနွေးလာတယ်။ လိုက်တယ်ဟုတ်လား
အစပိုင်းမှာတော့ငါမိုးရေပန်းကရယ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ သူတို့ကိုငါတကယ်စမ်းသတ်သည်အထိ။ ငါဝန်ခံခဲ့တယ်, ဒါဟာရန်အသုံးပြုတဲ့အများကြီးယူ။ , ဒါပေမယ့်သူကတကယ်တော့သင့်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုသတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသင့်ကိုပြန်သင့်ရဲ့အာရုံသို့ပြန်လှုပ်နီးပါး။
ငါပထမဆုံးအကြိမ်ရေအေးရေချိုးခဲ့သည်။ အအေးကအားလုံးကိုလမ်းနှင့်အတူအတွက်ခုန်တက်။ ၄၅ စက္ကန့်လောက်ပဲကြာပြီးငါ့ရဲ့အသက်ရှူမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါသော်လည်းယခုဒီထက်သန်စွမ်းခံစားရ! ငါသေချာတိုင်းအချိန်တစ်ခုချင်းစီကိုကြာကြာဆက်နေဖို့သွားမယ်။
နောက်ထပ်ယောက်ျားတစ်ယောက် - နံနက်တိုင်း ၅ မိနစ်ရေချိုးပါ။ faucet ကိုအေးသွားစေသကဲ့သို့လှည့်ပါ။ ပထမရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဒီဟာကမ္ဘာပေါ်မှာငရဲလိုခံစားရလိမ့်မယ်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ရေခဲနေသောရေချိုးခန်း၌နွေးထွေးစွာခံစားရရန်နှင့်စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုသက်သာစေသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီကငါအအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေရှာဖွေနေပါတယ်။ ငါအရင်ကဒီလိုမလုပ်ခဲ့ဘူး ကျွန်ုပ်သည်နေ့ (၆) ရက် (၇) ရက်နှင့် (၄) မိနစ် (၄) မိနစ်ရေခဲမုန့်ရေခဲမုန့်ဖြင့်ရေသောက်ပါသည်။ ၎င်းသည်နောက်မှအလွန်မြင့်မားပြီးကျွန်ုပ်၏စိတ်အခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးအရာအားလုံးကိုများစွာပိုမိုလွယ်ကူစေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ မင်းစဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုရင်မင်းကသူတို့ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်စမ်းကြည့်ချင်နေလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ် သူတို့နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်အချိန်များစွာကြာသည်။ သို့သော်သူတို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်။
[ရေချိုးခန်းထဲမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုရပ်တန့်ဖို့ဒီကောင်လေးကသူတို့ကိုသုံးခဲ့တယ်။ ] အရင်တုန်းကဆိုရင်ရေချိုးတာကိုကျွန်တော်မကြာခဏပြန်လုပ်မိတတ်တယ်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် ထိုအချိန်မှစ၍ ပြန်၍ မရခဲ့ပါ။
နောက်ထပ်မှတ်ချက်များ http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/1cjv4e/took_a_cold_shower_today_wow/ သွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ် http://www.reddit.com/r/freezingshowers များအတွက်
အအေးရေချိုးခန်း၏ 365 ရက်အတွင်း!
တစ်ဦးကိုနားထောင် Todd Becker ကအတူအင်တာဗျူးသူကအအေးရေချိုးခန်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုကရှင်းပြသည်သော။ (မြန်ရှေ့ဆက်နောက်ဆုံး 10 မိနစ်ရန်သင့်အားအချိန်တိုတောင်းလျှင်။ )
2008 လေ့လာမှု: စိတ်ကျရောဂါများအတွက်အလားအလာကုသမှုအဖြစ်အဆင်ပြေအောင်အအေးရေချိုးခန်း
၏က Short အကျဉ်းချုပ် ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းစဉ်အယူအဆနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်သူတစ် ဦး က "သီအိုရီ:
တစ်နေရာရာ, တစ်စုံတစ်ဦးကအဆိုပါအပျြောအပါးပျောက််လည်းကြွေတတ်တခါအပျော်အပါးအတွက်စသညျ့သိသာဖြစ်လာကြောင်းဆန့်ကျင်, ကို un-ပျြောမှေ့စအာရုံ generate စေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုအကြောင်းဒီကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးနှင့်ဆက်စပ်။ နှင့်အပြန်အလှန်။
ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဆောင်းပါးရှည်ကြီး။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူ၏အစာချေစာမူကွဲပါ
မွေ့လျော်စရာဖြစ်စေ၊ မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်စေအာရုံခံမှုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကဆန့်ကျင်ဘက်ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင်သာယာဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်နေစဉ်ဆန့်ကျင်မှုတစ်ခု၊ အပျော်အပါးသည်ရပ်တန့်သွားသောအခါသို့မဟုတ်ခေတ္တရပ်တန့်သွားသောအခါမသက်မသာမှုသည်သတိသို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ချိုမြိန်သောအချိုပွဲများတွင်အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကိုနှစ်သက်ခြင်းသည်အစာစားခြင်းအားရပ်တန့်ပြီးနောက်အချိန်အကြာကြီးဖြစ်ပေါ်လာသည့်မနှစ်မြို့ဖွယ်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သငျသညျရေအေးထဲမှာသင့်ရဲ့လက်ကိုသွင်းမယ်ဆိုရင်ဥပမာ,a"ကပူနွေးတဲ့" ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များနှိုးဆွပေးနေပါသည်, ဒါပေမဲ့သင်ရေထဲကနေသင်၏လက်ကိုရုပ်သိမ်းပေးရန်တစ်ခါသာကြောင်းနွေးထွေးမှုခံစားရသည်။
အကောင်းတစ်ဦးအရာများ၏အလွန်အကျွံရလဒ်များကိုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များတည်ဆောက်ကြဘူးကြောင်းသေချာစေရန်သာယာသောလှုံ့ဆော်မှုများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ကြိမ်နှုန်းအလယ်အလတ်။ ဥပမာ, အရသာအစားအစာအသေးစားဝေမျှစားခြင်းမဟုတ်သည်ကိုမုန့်ညက်မှာများနှင့်ကိုက်နေရာခြား - အဆင့်မဟုတ်ရင်အစာစားချင်စိတ်များနှင့်မတရားသောအားဖြည့်မယ်လို့သောပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များ (မတရားသော) လျှော့ချရန်လေ့လိမ့်မယ်။
သငျသညျကော်ဖီတစ်စက္ကန့်ခွက်ကိုသွားသည့်အခါ, သင်ဆိုနိုင်သည်တိုအသုံးအနှုန်း၌သင်တို့၏ရွှင်လန်းတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာသငျသညျမြင့်ဖိန်း counteracts နောက်ပိုင်းတွင်အပေါ်ပိုမိုပင်ပန်းသင်သည်စွန့်ခွာစေခြင်းငှါတစ်တုံ့ပြန်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်း။ ဖြည့်ညှင်းများအတွက်ဇီဝအငြင်းအခုံရှိပါသည်!
ကျနော်တို့သွယ်ဝိုက်ပျော်မွေ့စေအီကိုသုံးနိုင်သည်။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖိစီးမြင့်အပျော်အပါးများနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုဖန်တီးကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်မနှစ်မြို့ဖွယ်လှုံ့ဆော်မှုဆန့်ကျင်ခုခံကာကွယ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုမှသည်းခံစိတ်တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်ပျြောမှေ့စ inhibitory ဖြစ်စဉ်များကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအပျော်အပါး-ထုတ်လုပ်ကာကွယ်ရေးယန္တရားများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏လည်ပတ်ရာကိုမှန်ကန်ဇီဝဖြစ်စဉ်များရှိပါသည်။
တဦးတည်းလူသိများဥပမာစိတ်အားသန်သောစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများကအကြောင်းကိုယူဆောင်နဲ့အတူ Endorphins ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝအ opiates ၏ထုတ်လုပ်မှုသည်။ နဲ့အတူ Endorphins စာသားတစ်တန်ပြန်အပျြောအပါးပေးခွငျးအားဖွငျ့လေ့ကျင့်ခန်း၏နာကျင်မှုခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ကြိမ်နှုန်းတိုးပွားလာခြင်းအားဖြင့်, ကျနော်တို့သည်းခံ-ကျနော်တို့တက်ကြွစွာပျြောမှေ့စတဲ့စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်နောက်ခံ "သေံ" တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတည်ဆောက်ခြင်းကြသည်မဟုတ်။ ဤအတောအိကိုခေါ်ရာနှငျ့အညီအလွန်ဖြစ်ပါသည် "ပဿဒ္ဓိ"။ တောအိပဿဒ္ဓိစျြလြူရှုမှုသို့မဟုတ်ခံစားချက်တစ်ခုမရှိခြင်းမဟုတ်ပါ! ဆန့်ကျင်တွင်, ကဥပေက္ခာသမ္, ရောငျ့ရဲများနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတည်ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးသောပျော်ရွှင်မှုကိုတစ်ဦးအပြုသဘောအသိဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစိတ်ကျရောဂါ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၏ သင်ပင် "မြင့်က" မခေါ်ပါလိမ့်မယ်။
ပြိုင်ဘက်-ဖြစ်စဉ်များထံမှလာသည်ဟုအပျော်အပါး "နှေးကွေး" ဖြစ်၏ သူတို့တည်ဆောက်ရန်အချိန် ယူ. , ပိုပြီးတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးလာပြီး။ ယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုရပ်လိုက်လျှင်ပင်သူတို့ကဆက်လက်။ သူတို့ရပ်တန့်သည့်အခါနှင့်ပိုပြီးပြင်းထန်ဖြစ်ရသောတိုက်ရိုက်အပျော်အပါး, မတူဘဲအဘယ်သူမျှမရုတ်တရက်ဆုတ်ခွာတုံ့ပြန်မှု no "ဆိုတဲ့တဏှာ" ဤအရပ်မှရှိ၏။ သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းညှိုးနွမ်းစေရန်လေ့ရှိပါတယ်။
ကန ဦး မနှစ်မြို့ဖွယ်လှုံ့ဆော်မှု - လေ့ကျင့်ခန်း၊ အလုပ်၊ အအေးမိခြင်း - သင့်အားအတားအဆီးများကိုကျော်လွှားရန်လေ့ကျင့်ပေးသည်။ (ဆိုလိုသည်မှာ Stephen Pressfield ၏ RESISTANCE - သင်စိတ်အားထက်သန်သောအနုပညာနှင့်အလုပ်များကိုလုပ်ခြင်းအားရပ်တန့်စေသောအင်အားဖြစ်သည်။ )
[သူကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်စွဲလမ်းအတူသောမနှစ်မြို့ဖွယ်စိုးရိမ်စိတ်တန်ပြန်ဖို့လုံလောက်တဲ့နောက်ခံပျော်မွေ့တည်ဆောက်နိုင်မသစ်ကိုပျြောမှေ့စပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များ generate မှ (ချမ်းအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းကဲ့သို့) မနှစ်မြို့ဖွယ်လှုံ့ဆော်မှုမိတ်ဆက်ပေးနိုငျပုံကိုဖော်ပြရန်အပေါ်သွားသည်။ ]
(ထိုဆောင်းပါးကနေ, ငါ့အားဖြင့်အနည်းငယ် edited):
ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ Stoic“ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု” အယူအဆကိုလေ့လာပြီးနောက်မှာတော့“ မျှတခြင်း၊ ကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှု” ရဲ့နောက်ခံသေံကိုတည်ဆောက်ဖို့ငါရေအေးစက်နဲ့စမ်းသပ်နေပါတယ်။
ဒီတော့ဝေး, ငါပထမ ဦး ဆုံးစိုစွတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့အအေးသို့လှည့်။ စကော့တလန်ရေချိုးခန်းကိုခေါ်သည် (မည်သည့်ဝါသနာရှင်များ (haha!)) ဟုခေါ်သည်။ ) ၁၀၀ အထိရေတွက်။ ချီတက်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။
အေးတဲ့ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းတွေကအားဖြည့်ပေးပြီးအားဖြည့်ပေးပါတယ်။ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုအချို့ရှိမယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ wimpy“ 100 ရေတွက်ခြင်း” အစီအစဉ်သည်ကြီးမားသောအချိန် Stoic တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုရရှိရန်အချိန်မလောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့အဲဒါတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်နေတယ်၊ ​​အဲဒါကထိုက်တန်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သွယ်ဝိုက်ဆုလာဘ်တွေရှိတယ်လို့ငါ့ကိုပြောတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာ masochistic လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။
ဒါကြောင့်အအေးမိတစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့သည်နဲ့ကျွန်မအတော်လေးကြောက်မက်ဘွယ်သောခေါင်းကိုက်ခဲ့ကတည်းကတစ်နေ့မှာငါရေချိုးခန်း၏အအေးဇာတ်သိမ်းခုန်ကျော်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်အကြောင်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခဲ့သည်။ ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုသို့ပြုကြသည်ကို၎င်း, ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. 20 မိနစ်တစ်ချိုးယူ! က reemerge လုပ်ခဲ့တယ်တဲ့အခါမှာဒါဟာလျော့နည်းပြင်းထန်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ လက်ျာဘက်, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း?
သင်ရေချိုးချိန်၌ရေခဲမစတင်ပါနှင့်။ အလယ်အလတ်ရှိသောအပူချိန်ကိုရှာပါ၊ သို့မှသာရေသည်ပူသော်လည်းမအေးပါ။ အဲ့ဒီမှာစက္ကန့် ၂၀ မှ ၃၀ အထိနေပြီးရေအေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ပါ။ သင်ပြီးခါနီးတွင်ရေခဲကိုအေးစေပြီးသင်မည်မျှကြာနိုင်သည်ကိုကြည့်ပါ။
ဒီဟာကငါ့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးပဲ။ အအေးခန်းသောက်ပါ ဒါဟာမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်ပြီးငါ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်တာဝန်အရှိဆုံးပဲ။ အအေးမိရေပန်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခြီးမှမျးကြောင်းအရင်းအမြစ်များဤမျှလောက်ထွက်ရှိပါတယ်။ ငါသူတို့မင်းတို့ရဲ့စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာမင်းကိုပြောနေတယ်။ ၎င်းကိုဤအချက်အလက်များအတွက်အခြေခံအချက်အလက် (http://www.thehackedmind.com/7-reasons-to-take-cold-showers-and-1-that-really-matters/) သို့မဟုတ်ဤ (http: // wakeup-world) အတွက်ဖတ်ပါ။ com / 2012/04/11 / ten-health-benefits-of-cold-showers /) ။ သူတို့ကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေလိုက်ပြီ။ နံနက်တိုင်းတွင်ရေချိုးခန်းထဲသို့ခုန်။ လက်ကိုင်ကိုအနိမ့်ဆုံးသို့လှည့်ပါ။ အစပိုင်းမှာအရမ်းခဲယဉ်းပေမဲ့ ၄ င်းကိုသင်အသုံးပြုတာနဲ့ ၄ လသာရေအေးပြီးတဲ့နောက်မှာအအေးဆုံးအအေးမိတာကငါ့ကိုမေ့သွားစေတယ်။ ငါဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာငါမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာငါ့စိတ်ထဲတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ HOCD ဟာငါရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာအောင်စတင်လုပ်ဆောင်လာတာနဲ့အမျှနည်းနည်းလေးမှနည်းလာတယ်။ www.reddit.com/r/NoFap/comments/4rb2m/how_i_got_rid_of_hodc/
အအေးမိစတင်၏အကျိုးကျေးဇူးများနေ့ကို (Sydney Morning Herald) ကို